Maamulka Degmada Guriceel oo hey’adaha samafalka ka dalbaday in ay gurmad la soo gaaran Isbitaalka degmadaasi | Radio Muqdisho
Maamulka Degmada Guriceel oo hey’adaha samafalka ka dalbaday in ay gurmad la soo gaaran Isbitaalka degmadaasi
Published on January 3, 2013 by Mowliid · 1 Comment · 901 views
Maamulka dagmada Guriceel ee gobalka Galgaduud ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in ay si dag dag ah Adeeg caafimaad u soo gaarsiiso Cisbitaalka Magaaladaasi.
Hey’ada MSF oo ka howgeli jirtay cisbitaalada gobolada dhexe oo dhawaan Hakisay howlaha cisbitalka guud ee magaalada Beledweyn, ayaa hadana Shaacisay in ay joojineyso howlihii ay ka heysay cisbitalka degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud dabayaaqada bishan.
Gudoomiyaha degmada Guriceel Cismaan Ciise ‘’Taardhuleed’’ oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa ka dalbaday hey’adaha samafalka in ay gurmad la soo gaaraan Cisbitalka degmadaasi, si aysan u istaagin adeegyada caafimaad ee cisbitaalku u Qabto bulshada.
Cisbitalka degmada Guriceeel ayaa waxaa uu ka mid yahay cisbtitaalada ugu Waaweyn gobolka Galgaduud, kaas oo adeegyo caafimaad u qabta dhaawacyada Iyo bukaanada kaladuwan ee soo gaara cisbitalkaasi.
Omar says:	January 4, 2013 at 5:18 pm	insha allaah waxaan ku hanwaynahay in ay ii suurta gasho Himilada igu jirto si aan wax uga badalo Magaaladda Guriceel . waa magaladii aan ku dhashay kuna soo bartay sida qalinka loo qabto, i will never 4 gt u Guriiiiiiiiiiiiiiii…………..